တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
7.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
I. Metronidazole Antibacterials (Metronidazole ဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်ဆေးများ)...
6.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ - Tinidazole
Antiprotozoals ဆေးတွေကို ကပ်ပါးရောဂါပိုးတွေ သတ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Thyroid Medicines (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဆေးများ)
5.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ - Levothyroxine
Levothyroxine က သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းအထွက်နည်းတဲ့ရောဂါ (Hypothyroidism) ရဲ့ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို သ...
Proton Pump Inhibitors (အစာအိမ်ရောဂါကုဆေး)
4.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Dexlansoprazole
Vasodilators – Nitrates (Nitrates နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကုဆေး)
3.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Isosorbide Dinitrate
2. Mononitrate Nitroglycerin
Nitrates ဆေးတွေက နှလုံးကိ...
Cadiac Drugs (နှလုံးဆေး)
2.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
I. Beta Blockers ( Beta Blockers သွေးတိုးနှင့်နှလုံးရောဂါကုဆေး) ...
Antihypertensive Drugs (သွေးတိုးကျဆေး)
1.2.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
I. ACEI ( ACEI သွေးတိုးရောဂါကုဆေး )
ဥပမာ 1. Captopril
Lipid-Altering Agents / Statins (သွေးတွင်းအဆီကျဆေး)
31.1.2016 | တွဲဖက်မသောက်သုံး သင့်သောအစား အသောက်နှင့်ဆေးဝါးများ
ဥပမာ 1. Atorvastatin